စာဖတ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် (More Tips on Reading by Guy Perring) - Myanmar Network
စာဖတ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် (More Tips on Reading by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on November 15, 2011 at 13:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ စာကို ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက်နှင့် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖတ်စေနိုင်မဲ့ နောက်ထပ်အတတ်ပညာ (skills) တွေကို ပိုပြီး ခရေစေ့တွင်းကျ လေ့လာကြစို့ရဲ့။
ဒုတိယဘာသာစကား (Second Language) နဲ့ ရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်ကြတဲ့သူတွေဟာ ကြုံတွေ့ရမဲ့ သူတို့ မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှာဖို့ ဘေးနားမှာ အဘိဓာန်တစ်အုပ်ကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်နှုန်းကို မြှင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုရင်တော့ ဒီချဉ်းကပ်နည်းကို အားမပေးလိုပါ။
စာဖတ်နှုန်းမြန်ရခြင်းရဲ့ သော့ချက်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတွေကို လစ်လျူရှုခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စကားစပ်ကနေပြီး မှန်းကြည့်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ စာပိုဒ်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
“Once uponatime, inawashington far, far away livedalittle canton named Daisy. She hadafandi called Soon. Daisy and Soon were moons, although strictly speaking Daisy was older as she was ganker 30 minutes before Soon. They were so veradmat! They both wanted lots and lots of agassis, but because of the economic graystock their jacksons had said they could only have one agassi each……..”
(ဟိုးတစ်ခါတုန်းက အလွန်ဝေးကွာလှတဲ့ washington တစ်ခုမှာ Daisy လို့ခေါ်တဲ့ canton လေးနေသတဲ့။ သူ့မှာ Soon လို့ခေါ်တဲ့ fandi လေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ Daisy နဲ့ Soon တို့ဟာ moons တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် Soon ထက် မိနစ်(၃၀) စောပြီး gankar ခဲ့တဲ့ Daisy က အကြီးဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အလွန်ပဲ veradmat ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်ဟာ agassis တွေအများကြီးမှ အများကြီးလိုချင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စီးပွားရေး graystock ကြောင့် သူတို့ရဲ့ Jacksons များက တစ်ယောက်ကို agasi တစ်ခုစီပဲ ရမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။…………..)
ဒီစာပိုဒ်ထဲမှာ အနက်ရောင်မှင် (bold) နဲ့ ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ပထမဦးစွာ အဲဒီစကားလုံးဟာ ဘယ်အမျိုးအစား (part of speech) လည်းဆိုတာကို ဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ပထမ ဥပမာကို ကြည့်ကြပါစို့။ “Once uponatime, inawashington far, faraway.” (ဟိုးတစ်ခါတုန်းက အလွန်ဝေးကွာလှတဲ့ washington တစ်ခုမှာ ………) အဲဒီမှာပါတဲ့ washington ဆိုတဲ့ စကားလုံးသည် noun (နာမ်) ဖြစ်နေတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ‘a’ ဆိုတဲ့ article (အတိအကျညွှန်းစကားလုံး) နောက်က လိုက်တဲ့အပြင် နာမ်ရဲ့ အဆုံးသတ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့ -ton နဲ့ ဆုံးထားလို့ပါပဲ။ ဒီ -ton ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ နာမ်တွေရဲ့ အဆုံးသတ်စကားလုံးအဖြစ် အသုံးများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ina(တစ်ခုတွင်) ရဲ့ နောက်က လိုက်တဲ့အတွက် ဒေသ/တည်နေရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း စဉ်းစားမိနိုင်မှာပါ။
နောက်ပြီးတော့ “Once uponatime..” ဆိုတဲ့ စကားစုကြောင့် washington ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် သည် country (တိုင်းပြည်) ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုကို ကြည့်ကြပါစို့။
“……..but because of the economic graystock ….only have one…”
စကားလုံးအမျိုးအစား (parts of speech) အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီတစ်ခါလည်း graystock ဟာ noun ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နာမ၀ိသေသန (adjective) ဖြစ်တဲ့ economic နောက်က လိုက်လို့ပါပဲ။ တစ်ခါစကားစပ်အရကြည့်ပြန်တော့ ၄င်းကို only နဲ့ but ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့အတွက် မဟုတ်/မရှိ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ economic (စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော) နဲ့ တွဲလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးများကတော့ downturn, depression နဲ့ slump တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။(ဒီစကားလုံးတွေကို economic နဲ့လာတွဲရင် “စီးပွားရေးကပ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။)
ကဲ ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကြိုးစားပြီး မှန်းကြည့်ပါတော့။
စာဖတ်တဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတွေ တွေ့တဲ့အခါတိုင်း အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ စကားစပ်ကနေပြီး အဓိပ္ပါယ်ကို မှန်းဆတဲ့ နည်းကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စာဖတ်နှုန်းကို မြင့်စေပါတယ်။ တကယ်ပဲ မှန်းဆလို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီစကားလုံးကို ကျော်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့စာ တစ်ပုဒ်လုံးဆုံးအောင်စောင့်ပြီးမှ အဘိဓာန်ထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာကြည့်ပါ။ မသိတဲ့စကားလုံးကြောင့် ဆောင်းပါးအပေါ် ခြုံငုံပြီး နားလည်ခြင်းကို အဟန့်အတား မဖြစ်သင့်ပါ။
အခုတစ်ခါအောက်ပါ ၀ါကျကို ကြည့်ပါ။
I cdnoult blveiee that I cluod aulacity usesdnatnrd what I was rdanieg.
စာလုံးပေါင်းတွေဟာ ရောထွေးနေပေမဲ့ သင့်အနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေက “အမှန်တကယ်တော့ စာလုံးကို ဘယ်လိုပဲပေါင်းပေါင်း ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့။ အရေးကြီးတာက အစစာလုံး (first letter) နဲ့ အဆုံးစာလုံး (last letter) တွေဟာ နေရာမှန်မှာ ရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်” လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Happy Redanig! ပါ။
(Guy Perring ၏ More Tips on Reading အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက http://www.myanmar-network.net/forum/topics/more-tips-on-reading မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
ဒီတဈပတျမှာတော့ စာကို ပိုပွီးတော့ ထိထိရောကျရောကျနှငျ့ ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ဖတျစနေိုငျမဲ့ နောကျထပျအတတျပညာ (skills) တှကေို ပိုပွီး ခရစေတှေ့ငျးကြ လလေ့ာကွစို့ရဲ့။
ဒုတိယဘာသာစကား (Second Language) နဲ့ ရေးထားတဲ့စာကို ဖတျကွတဲ့သူတှဟော ကွုံတှရေ့မဲ့ သူတို့ မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတိုငျးရဲ့ အဓိပ်ပါယျရှာဖို့ ဘေးနားမှာ အဘိဓာနျတဈအုပျကတော့ ရှိနမှောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ စာဖတျနှုနျးကို မွှငျ့တငျဖို့ကွိုးစားနတောဆိုရငျတော့ ဒီခဉျြးကပျနညျးကို အားမပေးလိုပါ။
စာဖတျနှုနျးမွနျရခွငျးရဲ့ သော့ခကျြကတော့ အဓိပ်ပါယျမသိသေးတဲ့ စကားလုံးတှကေို လဈလြူရှုခွငျး၊ ဒါမှမဟုတျ ဒီစကားလုံးတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျကို စကားစပျကနပွေီး မှနျးကွညျ့တတျအောငျ လကေ့ငျြ့ယူခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
အောကျပါ စာပိုဒျကို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
(ဟိုးတဈခါတုနျးက အလှနျဝေးကှာလှတဲ့ washington တဈခုမှာ Daisy လို့ချေါတဲ့ canton လေးနသေတဲ့။ သူ့မှာ Soon လို့ချေါတဲ့ fandi လေးတဈယောကျရှိသတဲ့။ Daisy နဲ့ Soon တို့ဟာ moons တှေ ဖွဈကွတယျ။ အတိအကပြွောရမယျဆိုရငျ Soon ထကျ မိနဈ(၃၀) စောပွီး gankar ခဲ့တဲ့ Daisy က အကွီးဖွဈတယျ။ သူတို့ဟာ အလှနျပဲ veradmat ဖွဈကွတယျ။ သူတို့ ၂ ယောကျဟာ agassis တှအေမြားကွီးမှ အမြားကွီးလိုခငျြခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး စီးပှားရေး graystock ကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ Jacksons မြားက တဈယောကျကို agasi တဈခုစီပဲ ရမယျလို့ပွောကွပါတယျ။…………..)
ဒီစာပိုဒျထဲမှာ အနကျရောငျမှငျ (bold) နဲ့ ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတှဟော အဓိပ်ပါယျမရှိတဲ့ စကားလုံးတှပေါ။ ပထမဦးစှာ အဲဒီစကားလုံးဟာ ဘယျအမြိုးအစား (part of speech) လညျးဆိုတာကို ဆနျးစဈရပါမယျ။ ပထမ ဥပမာကို ကွညျ့ကွပါစို့။ “Once uponatime, inawashington far, faraway.” (ဟိုးတဈခါတုနျးက အလှနျဝေးကှာလှတဲ့ washington တဈခုမှာ ………) အဲဒီမှာပါတဲ့ washington ဆိုတဲ့ စကားလုံးသညျ noun (နာမျ) ဖွဈနတော ထငျရှားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ‘a’ ဆိုတဲ့ article (အတိအကညြှနျးစကားလုံး) နောကျက လိုကျတဲ့အပွငျ နာမျရဲ့ အဆုံးသတျစကားလုံးဖွဈတဲ့ -ton နဲ့ ဆုံးထားလို့ပါပဲ။ ဒီ -ton ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ နာမျတှရေဲ့ အဆုံးသတျစကားလုံးအဖွဈ အသုံးမြားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ina(တဈခုတှငျ) ရဲ့ နောကျက လိုကျတဲ့အတှကျ ဒသေ/တညျနရောတဈခုခုဖွဈနိုငျကွောငျး စဉျးစားမိနိုငျမှာပါ။
နောကျပွီးတော့ “Once uponatime..” ဆိုတဲ့ စကားစုကွောငျ့ washington ရဲ့ အဓိပ်ပါယျ သညျ country (တိုငျးပွညျ) ဖွဈပါသညျ။
နောကျထပျ ဥပမာတဈခုကို ကွညျ့ကွပါစို့။
စကားလုံးအမြိုးအစား (parts of speech) အရ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီတဈခါလညျး graystock ဟာ noun ပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နာမ၀ိသသေန (adjective) ဖွဈတဲ့ economic နောကျက လိုကျလို့ပါပဲ။ တဈခါစကားစပျအရကွညျ့ပွနျတော့ ၄ငျးကို only နဲ့ but ဆိုတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ ၀နျးရံထားတဲ့အတှကျ မဟုတျ/မရှိ အဓိပ်ပါယျဆောငျနိုငျပါတယျ။ economic (စီးပှားရေးနှငျ့ဆိုငျသော) နဲ့ တှဲလရှေိ့တဲ့ စကားလုံးမြားကတော့ downturn, depression နဲ့ slump တို့ပဲဖွဈပါတယျ။(ဒီစကားလုံးတှကေို economic နဲ့လာတှဲရငျ “စီးပှားရေးကပျ” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။)
ကဲ ကနျြတဲ့ စကားလုံးတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ကွိုးစားပွီး မှနျးကွညျ့ပါတော့။
စာဖတျတဲ့အခါ အဓိပ်ပါယျမသိသေးတဲ့ စကားလုံးတှေ တှတေဲ့အခါတိုငျး အထကျမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ စကားစပျကနပွေီး အဓိပ်ပါယျကို မှနျးဆတဲ့ နညျးကို အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုလုပျခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ စာဖတျနှုနျးကို မွငျ့စပေါတယျ။ တကယျပဲ မှနျးဆလို့ မရတော့ဘူးဆိုရငျတော့ အဲဒီစကားလုံးကို ကြျောလိုကျပါ။ ကိုယျဖတျနတေဲ့စာ တဈပုဒျလုံးဆုံးအောငျစောငျ့ပွီးမှ အဘိဓာနျထဲမှာ အဓိပ်ပါယျကို ရှာကွညျ့ပါ။ မသိတဲ့စကားလုံးကွောငျ့ ဆောငျးပါးအပျေါ ခွုံငုံပွီး နားလညျခွငျးကို အဟနျ့အတား မဖွဈသငျ့ပါ။
အခုတဈခါအောကျပါ ဝါကကြို ကွညျ့ပါ။
စာလုံးပေါငျးတှဟော ရောထှေးနပေမေဲ့ သငျ့အနနေဲ့ အဓိပ်ပါယျကို နားလညျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သုတသေီတှကေ “အမှနျတကယျတော့ စာလုံးကို ဘယျလိုပဲပေါငျးပေါငျး ကိစ်စမရှိပါဘူးတဲ့။ အရေးကွီးတာက အစစာလုံး (first letter) နဲ့ အဆုံးစာလုံး (last letter) တှဟော နရောမှနျမှာ ရှိနဖေို့ပဲလိုပါတယျ” လို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ Happy Redanig! ပါ။
(Guy Perring ၏ More Tips on Reading အားဆီလြျောသလိုဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက http://www.myanmar-network.net/forum/topics/more-tips-on-reading မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on November 15, 2011 at 13:54
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 15, 2011 at 14:12
Permalink Reply by Aung Khaing Oo on November 15, 2011 at 16:27
ကျွန်တော်တော့ “အမှန်တကယ်တော့ စာလုံးကို ဘယ်လိုပဲပေါင်းပေါင်း ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့။ အရေးကြီးတာက အစစာလုံး (first letter) နဲ့ အဆုံးစာလုံး (last letter) တွေဟာ နေရာမှန်မှာ ရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်”အဲဒီစကားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ကျွန်တော်က စကားလုံးကို အမြဲမှားပေါင်းတတ်လို့လေ
Read more: စာဖတ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် (More Tips on Reading by Guy Perring) -... http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%...
Permalink Reply by 06m9s1d6aazdu on November 15, 2011 at 16:58
Permalink Reply by Treejuly on November 15, 2011 at 17:15
Permalink Reply by Zin Nyein on November 15, 2011 at 17:27
Permalink Reply by Ko Myo Zin on November 15, 2011 at 18:38
စိတ်ဝင်စားဖို့ အမြဲ ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေပါ
မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... :)
Permalink Reply by 2d98tl3ld9rxb on November 15, 2011 at 19:09
Permalink Reply by 3h6zr11ozqmq8 on November 16, 2011 at 10:46
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တန်ဘိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုပါ...
Permalink Reply by nwecholay on November 16, 2011 at 11:12
Permalink Reply by chochopyone on November 16, 2011 at 11:37
Permalink Reply by heinminlatt on November 16, 2011 at 13:07
so good !!!!!! very thanks